Sunday March 29, 2020 - 10:35:11 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Hoggaamiyaal katirsan dhaq dhaqaaqa jihaadiga Al Shabaab.
Inta badan marka aan Internetka booqanayo waxaan Allaah weydiistaa inaanu iga hor keenin waxaan ka naxo, taas bedelkeeda Allaah Ayaan weydiistaa kheyr iyo wax farxad geliya quluubteena iyo tan Muslimiinta.
Habeenkii ay Khamiista soo galeysay, taariikhduna ku beegneyd 25-ka bisha Marso 2020-ka, ayaa salaadda cishaha kadib waxaan galay Internetka, markiibana waxaan ku billaabay inaan booqado mareegaha Islaamiga, gaar ahaan website-yada Idaacadaha Al-Andalus iyo Al-Furqaan, anigoo raadinaya wararkii ugu dambeeyey ee howlgallada Mujaahidiinta iyo Akhbaaraadka Muslimiinta Wilaayaadka Islaamiga.
Markiiba waxaan arkay cinwaan soo jiidasho leh oo u qornaa sidatan " Xarakada Al-Shabaab Oo qabatay Shirweyne looga tashanayay Halganka Jihaadka Bariga Africa Bayaan+Fatwo+Sawirro”.
Markii aan gujiyay linkigaas, waxaan arkey waxaan xitaa marnaba khiyaaligeyga kusoo dhicin, waxay macluumadu sheegtay in inkabadan 100 ruux oo isuga jira Culimo, Hogaan Jihaad iyo Nabadoono ay qaateen kulan 5 maalmood soconayay, kana soo baxeen fatwo iyo bayaan muhiim ah.
Qodobada ay ka fatwoodeen culimada Muslimiinta waxay ahaayeen kuwa xasaasi ah, islamarkaana Umaddu u baahi qabtey in laga shaafiyo, loona bidhaamiyo xukunka diineed iyo waxay Shareecadu ka qabto.
Waxay Culimadu ka fatwoodeen dastuurka gacan ku sameyska ah iyo Nidaamka Federaaliisimka, Mowqifka Sharciga ee waxa loogu yeero Xukuumadda Soomaaliya, Xukunka Doorashooyinka lagu wado iney ka dhacaan wadanka, Cowlamada bariga Africa, iyo in la iska dafciyo cadowga horarka ah.
Qodob kasta waxay culimadu soo dareeriyeen nusuusta sharciga ah ee loo cuskaday, aad beyna u sugeen, Allaah ha barakeeye’e, waxaana fatwada culimada akhriyay Sheekh Jaamac Cabdi Salaam Warsame oo kamid ah culimada ugu caansan ee Soomaaliya gaar ahaan Wilaayaadka Islaamiga.
Bayaanka kasoo baxay shirka wadatashiga Arimaha Jihaadka Bariga Africa, waxay ahaayeen qodobo wax ku ool ah, oo muhiimad u leh muslimiinta bariga Africa, waxaana dhinacyada shirka xaadiray ay isla garteen in Muslimiinta ay wajahayaan duulaan adag, Mujaahidiintana ay tahay iney sii xoojiyaan halgankooda Xaqqa ah.
Qodobada sida gaarka ah ii soo jiitay, islamarkaana ku jiray bayaanka waxaa kamid ahaa, in ka qeybgalayaashu ay isla garteen in laga digo qulqulka Itoobiyaanka Xabashida ee soo galaya dalka, kuwaas oo colaada Soomaalida kala dhexeysa ay tahay mid soo jireen ah, Dhulkii Awooweyaasheen ee ay xooga ku qabsadeen ayaana inooga baahan inaan soo dhicino.
Dagaalka wacyiga iyo maskaxda waa mid kamid ah furimaha ugu muhiimsan ee ay Muslimiintu kaga hortagayaan duulaanka gaalada, sidaas darteed ka qeybgalayaasha kulankii wadatashiga Jihaadka bariga Africa waxay isla garteen in la xoojiyo jaanibkaas, Umadnaa la wacyi geliyo.
Haddii aan u imaado hoolka uu ku dhacay shirka, waxaan aad ula dhacay qaabka wanaagsan ee loo diyaariyay, waxaa ii muuqatay in aan dadaal loo yareysan hirgelinta shirkaas iyo qurxintiisa intuba, Rag rabigooda kaashadana waxay hirgelin karaan waxaan la suureysan Karin!.
Markaan arkay sawirrada waxaan aad ugu farxay waayeellada cirreystay ee ka talinaya, kana tashanaya aayaha Umadooda, waxaana si dhab loo yaqiinsan karaa iney dhamaatay ishaacaadii horraanteedaba wax kama jiraanka ahayd ee ay faafin jireen dadka uu cadowga ka caqli badiyay ee ahayd " waa dhalinyaro aan kala garaad rooneyn, lagana heleynin dad rug cadaa ah”.
Sidiisaba Jihaadka, wuxuu kulmiyaa qeybaha kala duwan ee bulshada, waxaa xaqiiq ah in Mujaahidiinta laga helayo dad 80 jirro ah, sidoo kalena ay ka buuxaan dhalinyaro ku barbaaray cibaadada Allaah, aanna u rajeyneyno Inshaa’Allaah in Qiyaamaha ay kamid noqdaan dadka harsanaya Harka Allaah SWT.
Dhamaan ka qeybgalayaashu way is dhinac fadhiyeen, waxay ka sheekeysteen oo ay isla gorfeeyeen qadiyadda Umadooda, go’aanno wax ku ool ahna way soo saareen, Adeer Fartaag oo shirkaas ka qeybgalay ayaa mar la waydiiyay waxay halkaas ka qabanayeen yiri " Waxaan ka tashanaynay arimaheena”.
Waaa sax, waxay ka tashanayaan arimaha Umadooda, xaq bayna u leeyihiin, waxaase wax Allaah looga mahdiyo ah inaan soo gaarno waqti dadka intaas la eg ay u kulmayaan Allaah dartii, ka arrinsanayaan horumarinta Jihaadka, xilli weliba dadka qaar oo maanta nool ay soo arkeen iyadoo fadhiyo loo qabanayo hagar daameynta Jihaadka, sidaba uu sheegay Sheekh Suldaan oo aan ka dhageystay barnaamijka Diiradda Jimcaha.
Muxuu Muujinayaa Kulanka Wadatashiga Arimaha Jihaadka Bariga Africa:
Xaqiiqdii shirkan, magaca uu watay oo keliya ayaaba ku deeqaya, qadiyaddu ma ahan Soomaaliya iyo dhowr gobol, qadiyadda laga doodayo iyo waxa laga shuureynayo waa xaalka Muslimiinta Bariga Africa, fatwada iyo qodobada halkaas kasoo baxeyna waxaa laga doonayaa Muslimiinta mandiqdan ku nool iney fuliyaan.
Wuxuu muujiyay shirkaas, macnawiyaatka iyo himmada sarreysa ee hormuudka Jihaadka Bariga Africa. Wuxuu banaanka soo dhigay iney Raayada noo sidaan Halyeeyo Umadeed, Naxsabuhum Kadaalika walaa Nuzakkii Calla-llaahi Axadaa.
Wuxuu iftiimiyay shirkaas, in Wilaayaadka Islaamiga ay yihiin dhul ballaaran oo ay ku noolyihiin bulsho tiro badan, dadka Muslimiinta ee ku dhibaateysan caalamka gaar ahaan bariga Africana ay la gudboontahay iney lasoo baxsadaan diintooda, oo ay iska xaadiriyaan dhulkaas lagu maamulayo Shareecada Islaamka.
Wuxuu kulankaas na tusay in Jihaadkan uu yahay mid ay Umaddu leedahay, qolo gaar ah iyo ashkhaas gooni ahna aanu gacanta ugu jirin, qofkii tala iyo tusaaleyn wadana ay Mujaahidiintu soo dhaweynayaan, dabcanna shirkaas wuxuu ahaa kii ugu ballaarnaa, laakiin kulamada wadatashiga waa kuwa si joogta ah u dhaca, sidaba uu sheegay Sheekh Cali Dheere Allaah Dhowree.
Ugu dambeyntii, waxaan leeyahay, Shukran Hogaanka Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab, waxaad markale sugteen inaad tihiin rag dareemaya culeeska saaran iyo umadda sugeysa halka ay la egtahay.
Waxaad dhigteen wacdaro taariikhi ah, oo ay taariikhda islaamku baal dahabi ah ku qori doonto, waxaad muujiseen inaad u nooshihiin Umadiina, Gaal iyo Muslimna waxaad tusteen in Jihaadkan uu imtidaad u yahay Jihaadkii Nabiga Salla-llaahu Caleyhi wasallam iyo Kii Saxaabada Ridwaanullaahi Caleyhim ee ku dhisnaa ku ad adkaanta gaalada iyo in loo nuglaado Muslimiinta.
Umaddu waxay sideedaba ku nooshahay Hogaankeeda, Haweeney ayaa Xajka waxay ku weydiisay Abuu bakar Sadiiq, khaliifkii koowaad ee Muslimiinta, inta ay Muslimiintu heysan doonaan diintooda.
Markaas buu Abuu bakar ku jawaabay hadal muujinaya Fiqhiga diineed ee uu xambaarsanaa, wuxuuna yiri " waxaad arinkan oo ah islaamnimada ku sugnaan doontaan, inta ay Umaradiinu toosanyihiin”.
Umadda waxaa la gudboon iney duco iyo Nusro la garab taagnaato dadka ku hogaaminaya diinta iyo Jihaadka, Allaahna waxaan weydiisaneynaa inuu ku sugo Xaqqa, ka ilaaliyo fitanta, kana dhowro dhagaraha cadowga iyo shirqoolladooda.
Markale, Shukran Hogaanka Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab, waxaad ka farxiseen malaayiin Muslimiin ah, waxaadna ka carareysiiseen qoomam gaalo ah, halkiina kasii wado halganka, Qofkii arimaha sarreeya dalbana habeenno badan inuu soo jeedo waa lama huraan.
Ugu dambeyntii, waxaan rajeynayaa dadka ugu horeeya ee uu Allaah ku sharfi doono shahaadada iney gaarsiiyaan raggii horey Allaah ula kulmey, Jihaadkan uu Allaah muslimiinta ku cizzeeyeyna sabab u ahaa, oo uu kamid yahay Sheekh Abuu Zubeyr, in Jihaadka uu halkiisa kasii socdo, Mujaahidiintu mideysanyihiin, umaduna Samci iyo dhaaco la garab taagantahay hogaankeeda!.
W/Q: Warsame Ugaas
kala xiriir SomaliMeMo Email: [email protected]
Diiday Damaca Cusub ee Ilmo gareen iyo Aabahood, Qoowsaaradu yeeyna kuu qarin Midida laguugu qali doono [Maqaal].